News - Baaxadda suuqa adduunka ee warshadaha wax-ka-beddelka ayaa ka badnaan doona 100 bilyan sannadka 2020
Baaxadda suuqa adduunka ee warshadaha wax-ka-beddelka ayaa ka badnaan doonta 100 bilyan sannadka 2020
Baaxadda suuqa adduunka ee warshadaha wax-ka-beddelka ayaa ka badnaan doona 100 bilyan sannadka 2020
Sanadihii la soo dhaafay, baahida gudbinta iyo baahinta suuqyada qalabka korontada adduunka guud ahaan wey sii kordheysaa.
Ballaarinta warshadda tamarta, kobaca dhaqaalaha iyo baahida loo qabo dalalkan soo koraya ayaa kaxayn doonta suuqa adduunka ee tamarta wax ka beddela $ 10.3 bilyan sannadka 2013 illaa $ 19.7 bilyan sannadka 2020-ka, iyadoo korodhka sanadlaha ah uu yahay 9.6 boqolkiiba, sida ay sheegeen hay'adaha cilmi-baadhista.
Kordhinta degdegga ah ee baahida korontada ee Shiinaha, Hindiya iyo Bariga Dhexe ayaa ah wadaha ugu weyn ee kororka laga filayo kororka suuqa adduunka ee tamarta korantada. Intaa waxaa dheer, baahida loo qabo in la beddelo oo la casriyeeyo beddelayaashii hore ee Waqooyiga Ameerika iyo Yurub ayaa noqotay darawalka ugu weyn ee suuqa.
"GRID-da Boqortooyada Midowday waa mid aad u liidata oo ay tahay kaliya in la beddelo oo la casriyeeyo shabakadda in waddanku awood u yeelan doono inuu ka fogaado madoobaadka. Si la mid ah, waddamada kale ee Yurub, sida Jarmalka, waxaa ka socda dayactir xagga shabakadda iyo korantada ah si loo hubiyo in koronto joogto ah la helo. "Sidaas waxaa leh falanqeeyayaasha qaar.
Aragtida xirfadleyda, waxaa jira laba arrimood oo loogu talagalay xawaaraha kobaca xoog leh ee miisaanka suuq-geynta adduunka. Dhinac marka laga eego, casriyeynta iyo bedelida isbaddelada dhaqameedku waxay abuuri doonaan qayb weyn oo suuq ah, ciribtirka badeecadaha dib udhaca waxay kobcin karaan horumarka wax ku oolka ah ee xaraashka iyo qandaraasyada, waxaana muuqan doona faa iidooyin dhaqaale oo aad u badan.
Dhinaca kale, cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarista, iibinta, isticmaalka iyo dayactirka tamarta-keydinta iyo kuwa wax-beddelaya ee caqliga badan ayaa noqon doona kuwa guud, badeecooyinka cusubna waxay si hubaal ah u keeni doonaan fursado horumarineed oo cusub ee warshadaha.
Xaqiiqdii, warshadaha waxsoosaarka transformer-ku waxay ku tiirsan yihiin maalgashiga warshadaha durdurrada sida korontada, shabakadda korantada, metallurgy, warshadaha batroolka, jidadka tareenka, dhismaha magaalooyinka iyo wixii la mid ah.
Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo laga faa'iideysanayo horumarka degdegga ah ee dhaqaalaha qaranka, maalgashiga dhismaha korontada iyo korantada korontada ayaa sii kordheysa, iyo baahida suuqa ee qalabka gudbinta iyo qaybinta ayaa si weyn kor ugu kacay. Waxaa lafilayaa in baahida suuqa gudaha ee transformer-ka iyo qalabka kale ee gudbinta iyo qaybinta ay kusii nagaan doonaan heer aad u saraysa mudo dheer.
Isla mar ahaantaana, xarunta shaqada ee shabakadda cuf isjiidadka iyo istiraatiijiyadda horumarinta ee dhammaan warshadaha tamarta korontada ayaa leh saameyn weyn, otomaatiga shabakadda qaybinta iyo hirgelinta shaqada dib-u-habeynta ayaa horseedi doonta baahida suuq-geynta suuqa, dalabku wuxuu si weyn u kordhin doonaa tirada Wadarta guud ee suuqa wax ka badala ayaa si tartiib tartiib ah ugu janjeeraya dhanka Shiinaha, adeegsiga alaabooyinka soo goosadka ah ayaa la filayaa in lagu gaaro natiijo wanaagsan dalka Shiinaha.
Waqtiga boostada: Aug-19-2020